SEENAA ELEMOO QILXUU – Welcome to bilisummaa
Guyyaa Faxnoon lubbuu nama Oromoo galaafatan, qabsaawonni Amaarota baadiyyaa keessa jiranitti dhaqanii hulaa dhadhawanii, qabsoon manaa bahaniif, tan hiyyeessa Amaaraa, kanneen hawaasa Oromoo keessa nagayaan jiraatan miidhuu akka in tahin mirkaneessaniif. Gochi Faxnoo isaanii fii Oromoota jiddutti garaa-garummaa uumuuf waan karoorfame tahuu beeysisuun, dhaamsaa waliin jaratti ergan. Dhaamsa Faxnoof barreessan irrattiis, akeeka deemaniif ifa baasaniif. Wal’aansoon itti jiran tan gabrummaa Habashaa ifirraa buqqisuu fii, tan abbaa biyyummaa ummata Oromoo mirkaneeysuu tahuu adeessaniif. Sanumarratti dabalanii, ummata nagaayaan jiraatan irratti ajjeechaa hojjatamu akka balaaleeffatan hubachiisan. Akkasumaa waliin, kana booda, yo nama Oromoo tokko ajjeesan, dhiiga gama kaanirraa dhangalauuf warri itti gaafatamu isaan taachaa beeysisan.
Previous Oromo TV: Gaafii fi Deebii (Bakka-bu’aa KWO – Ob/Tamaam Baatii Wajjiin)
Next Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) Oromo Liberation Front(OLF)